UNSOS OO QABATAY AQOON-ISWAYDARSI LAGU KORDHINAYO XOOGGAGA SOMALIYA IYO TIJNOLOJIYADA | UNSOS
Iyadoo la eegayo yoolka ay Qaramada Midoobay u dejisay Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) oo ah in mas'uuliyadaha amniga qaranka lagu wareejiyo Ciidamada Ammaanka Soomaaliya marka la gaaro December 2021 (S/RES/2431 (2018)), Qeybta Farsamada Goobta (FTS) ee Xafiiska Taageerada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOS), oo kaashanaya unugga G6 ee AMISOM, ayaa qabanqaabiyay aqoon-isweaydaarsi ku saabsan Kondhinta Xooggaga iyo Tikolojiyada oo soconaya mudo laba maalmood ah. Waxaa loogu talagalay in lagu soo bandhigo xalalka tiknoolajiyadda AMISOM oo laga yaabo in looga faa'iidaysto si loo hubiyo in guulaha laga gaaray sugidda amniga dalka aysan burburin inta lagu jiro kala-guurka.
AMISOM, oo ka kooban Uganda, Kenya, Burundi, Somalia, Ethiopia, Djibouti, iyo Sierra Leone ayaa dowladda Soomaaliya ka caawineysa la dagaalanka kooxda xagjirka ah ee al-Shabaab tan iyo 2007. Aqoon-isweydaarsigan ayaa yimid xilli 22,000 oo askari oo nabad ilaalin ah ay yaraynta tirooyinkeeda, iyada oo 1,000 askari ay ka baxeen bishii December ee la soo dhaafay. Tiro la mid ah ayaa la filayaa inay ka baxdo bisha Febraayo 2019 gebi ahaanba, geedi-socod ku saleysan xaalado oo uu qaatay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.
Wax ku Saabsan Munaasabada
Aqoon-iswaydaarsiga ay hoggaaminaysay UNSOS FTS, oo lagu qabtay magaalada Muqdisho 4tii ilaa 5tii Sebtember, waxaa ka soo qaybgalay ciidan sare iyo wakiilo rayid ah oo ka socday UNSOS iyo AMISOM, oo ay weheliyaan Saraakiisha Qorsheynta ee Xarunta Ciidanka AMISOM iyo J2, J3 iyo J5 Cell oo ka socda lixda qaybood ee sameynta ciidanka nabad ilaalinta. Kormeerayaashu waxay ka soo qaybgaleen Kooxda Taageerada Hawlgalka Ingiriiska iyo Xarunta Taliska Afrika ee Maraykanka ee Jabuuti iyo Jarmalka.
Aqoon-isweydaarsiga UNSOS-AMISOM wuxuu ka faa’iidaystay casharradii laga bartay Taliska Qaybaha AMISOM, waxayna ujeeddadiisu ahayd
Wax ka qabashada caqabadaha saadka ee AMISOM iyo dal -daloolada ka jira goobteeda dagaalka iyo xoojinta awooda saadaalinta marka ay isu diyaarineyso kala -guurka
Abuurista wacyigelin ku saabsan farsamooyinka iyo xalalka u adeegi kara xoog -badaha iyo awood -siinta aagagga soo bandhiga caqabadaha ugu waaweyn ee dalka. Kuwaas waxaa ka mid ah saadka, sahaminta biyaha, koronto dhalinta kale, daaweynta biyaha, iyo maaraynta qashinka.
Xalalka teknolojiyada iyo bandhigyada
Waxaa ka mid ah xalalka loo soo bandhigay ka -qaybgalayaashii waxaa ka mid ahaa baabuurta aan duuliyaha lahayn, qalabka miinooyinka, awoodda hortagga walxaha qarxa, madaafiicda, taangiyada iyo awoodda difaaca hawada, baabuurta injineernimada, hawlgallada nafsaaniga ah, taageerada hawada ee dhow, wada -shaqaynta qalabka, awoodda aragga habeenkii, awoodda, taageerada quadcopter, xerada adeegyada amniga, tababbarka qalabka, raadraaca, isku-xidhka farqiga luqadda, aasaasidda Xarunta Hawlgallada Wadajirka ah ee Xarunta Dhexe ee Waaxda (luuqadaha badan), jammers, iyo sawirrada dayax-gacmeedka.
Muddadii labada maalmood ahayd, waxaa UNSOS soo bandhigtay; Adeegga Miino -baarista Qaramada Midoobay (UNMAS); Wakiillada Qeybta AMISOM iyo Booliska; Macluumaadka, Qeybta Farsamada Isgaarsiinta; Waaxda Hal -abuurka iyo Farsamada ee FTS; iyo Unugga Sirdoonka, Kormeerka iyo Sahanka. UNMAS waxay ku soo bandhigtay bandhigga aqoon-isweydaarsiga IED, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo mashiinnada miino-xaaqista. Kalfadhiyo goos goos ah ayaa u oggolaaday ka -qaybgalayaashu in ay sii falanqeeyaan mowduucyo gaar ah oo xiise leh, natiijadoodiina waxaa loo soo bandhigay dhammaan ka -qaybgalayaasha dhammaadkii aqoon-is weydaarsiga.
Agaasimaha ICTD Anthony O'Mullane, Madaxa Qeybta Hawlgallada Militariga ee ICTD Stefan Lemm, Sarkaalka Taageerada Istiraatiijiga ee ICTD David Padi; iyo Madaxa Horumarinta Teknolojiyada, Naqshadaynta & Qorshaynta ee Xarunta Adeegga Caalamiga ah ee Qaramada Midoobay (UNGSC) Widmark Valme ayaa ka mid ahaa soo -bandhigayaasha.
Soo bandhig wadashaqeyn lala yeesho AMISOM – Allan Canonizado, UNSOS.
Qaab -dhismeedka Teknolojiyadda Goob -joogga: Iyada oo lagu taageerayo Aqoon -is -weydaarsiga Xoogga Badan & Farsamada -Anthony O'Mullane, ICTD.
ICT ee Ergooyinka Goobta - David Padi, ICTD.
Qiimaynta Awoodda Tirada Badan ee Ciidanka AMISOM ee Jira –Taageeraha Madaxa Hawlgalka AMISOM, Gen Fidza Dludlu
Sirdoonka, Ilaalada iyo Sahaminta-Capt Charlie Ayre-Smith
Qiimaynta Amniga iyo Hanjabaadda - Qaybta 1aad ee AMISOM
Ciidanka MCOP ee AMISOM – Jasenko Udovicic, UNSOS
Teknoolojiyada Cusub ee Ergooyinka Goobta ee Qaramada Midoobay – Stefan Lemm, ICTD
Loo Baahan Yahay Xooga Badan ee Hawlgallada Booliska ee Soomaaliya –Boolis AMISOM
Taageerada UNMAS ee AMISOM - Seamus McMenaminIsku -darka Ilaha Xogta ee Awood -siinta Nabadoonnada - Widmark Valme, UNGSC
Ku-xigeenka Wakiilka Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika ee Soomaaliya-AMISOM Simon Mulongo ayaa khudbaddii ugu muhiimsanayd jeediyay. Waxa uu xusay in geeddi -socodka xasilinta Soomaaliya uu gaaray heer xasaasi ah oo u baahan maal -gelin dheeraad ah oo ku aaddan tiknoolojiyadda casriga ah si loo hubiyo in aysan jirin daldalolo amni inta lagu jiro marxaladda dhimista. Wuxuu xusay in farsamada la shaqaynayaa ay tahay mid waarta, gaar ahaan xilliga kala guurka.
Agaasimaha UNSOS Amadu Kamara ayaa xusay in iyadoo xeeladaha loo adeegsado nabad -ilaalinta iyo dagaallada ay soo kordheen oo ay ka mid yihiin adeegsiga teknoolojiyadda, haddana wuxuu qirtay in Soomaaliya isticmaalkeeda aan si weyn looga fiirsan muddadan hoos u dhaca. “Aad bay muhiim u tahay in… fikirkaan hawlgalku uu tixgeliyo faa iidooyinka farsamo ee aan yeelan karno si aan isugu hagaajino dhimista tirada”. Wuxuu xusay in loo babacdhigo dagaallada asymmetrical -ka ah, sida ka jirta Soomaaliya, wacyi -gelinta xaaladda waa lagama maarmaan.
Agaasimaha ICTD Anthony O'Mullane ayaa yiri: "Fahamka xoog -badaha xoog -weynaha ayaa muhiim u ah wanaajinta awoodaha xoogga". Wuxuu xusay in aqoon isweydaarsigu uu ku soo beegmay xilli ay u soo bandhigtay fursad isaga iyo kooxdiisu ay ku fahmi karaan shuruudaha iyo caqabadaha AMISOM. Sidan, waxaa laga yaabaa inay si fiican ula falgalaan hawlgalka oo ay la wadaagaan waaya -aragnimadooda adeegsiga farsamada. Wuxuu ku wargeliyey ka -qaybgalayaasha in la diyaariyey Qaab -dhismeedka Teknolojiyadda Goob -joogga si loo taageero natiijooyinka aqoon -is -weydaarsiga iyada oo la siinayo talooyin la hirgelin karo oo ku jira xaaladda AMISOM.
Madaxa UNSOS FTS Allan Canonizado, isagoo ku doodaya adeegsiga farsamada si loo taageero AMISOM, wuxuu ku dhiirri -galiyay bulshada Teknoolojiyadda Field inay kaalin muhiim ah ka ciyaaraan dhinaca is -beddelka xoogga baddan. Diyaarinta macnaha saxda ah ayaa fure u ah-ka-fiirsashada geeddi-socodka, dhaqanka iyo caqiidada guud-si loo fahmo sida farsamadu u saamayn karto iyo/ama loogu dabaqi karo saamayn weyn. “Adeegsiga tiknoolijigu waa qaraabo kiiskan maadaama diiradda la saarayo sidii loo samayn lahaa hab dhammaystiran oo aakhirka ku habboonaanta cabbirrada CONOPS ee saxda ah”.
Sarkaalka Hawlgallada ee Qeybta 6aad ee AMISOM Gaashaanle Dhexe B. Oloko ayaa sheegay in aqoon isweydaarsiga lagu ogaaday gol -daloolooyinka marka hawlgalku bilaabo in la dhimo askarta, isagoo xusay inay qaadan doonaan farsamooyin lagu xoojinayo hawlgalladooda.
Warbixintii ugu dambaysay ee dhacdada aqoon-iswaydaarsiga, oo ay ku jiraan caqabadaha ugu daran ee lagu tilmaamay talooyinka, waxaa soo saaray FTS UNSOS waxaana hadda dib -u -eegis ku sameynaya ICTD si ay u hagto si loo go'aamiyo tallaabooyinka xiga.
 UNSOS OO TAAGEERTAY DADAALLO LAGU SOO CELINAYO DHOOLACADAYNTA WAJIYADA SOOMAALIDA QABA CILLADAHA FARUUR DILAACA